Wholesale A5 tsy misy tariby manome tariby finday mpanamboatra Notepad mpanamboatra sy mpamatsy | Sheerfond
fahafahana 4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh / 10000mAh
1. Ity dia vokatra fandraharahana mihaja, mety indrindra ho an'ny mpandraharaha. Izy io dia kitapo zipper fitehirizana izay afaka mitahiry telefaona finday, tariby famandrihana, karatra fandraharahana, karatra banky, ary takelaka. Izy io dia miaraka amin'ny banky herinaratra sy charger tsy misy tariby. Ho an'ny asa aman-draharaha any ivelany, tsy maninona ny mitondra an'ity kitapo zipper ity.
2. Vokatra mamorona ity. Ity ihany koa ny vokatra misy anay. Afenina ny banky herinaratra. Rehefa mila ny fiasan'ny banky herinaratra ianao dia tsindrio ny switch ary mipoitra ny banky herinaratra. Rehefa tsy mila azy ianao dia tsindrio ilay switch. Afenina ny herin'ny finday, ary miorina ao anaty hoditra ihany koa ny famandrihana tsy misy tariby.
Kitapo fitehirizana orinasa, misy ny takelaka finday, tompona telefaona finday, herinaratra finday anatiny sy charger tsy misy tariby, kitapo finday, kitapo, tariby fampirimana fitehirizana, mpihazona penina. Ny tena mampiavaka ny vokatra dia:
3. Izy io koa dia manana fiasan'ny finday miafina miafina, izay azo ovaina ho mpihazona finday amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasana rohy Velcro.
4. Mety amin'ny logo manokana, tena mety amin'ny fanamboarana fanomezana, raha ilaina izany, ny sary dia azo atao efijery manjelanjelatra, izay mety kokoa amin'ny hetsika fampiroboroboana orinasa.
5. Milamina ny kalitaon'ny vokatra, nandalo CE, FCC, ROHS fanamarinana ny vokatra, miakatra ny takelaka boribory, avo ny tahan'ny fiovam-po, milamina sy azo antoka ny fahombiazan'ny vokatra ary notsapaina 100% ny vokatra tsirairay
Teo aloha: 3in1 tsy misy tariby famandrihana pad totozy
Manaraka: Fanomezana napetraka